Toerana niaviany: Teknolojia Hebei, Sina: hafanana voatsabo, famonoana ary famonoana nahatratra ny fenitra iraisam-pirenena
Kalitao azo ianteherana Ny ampahany amin'ny tsiranoka rehetra dia tsy maintsy hosedraina alohan'ny fandefasana azy
430mm 1862519240 dingana telo fanakorontanana manaitra tampoka kapila avo lenta kapila kapila
Ity karazana 430mm 1862519240 dingana telo ity dia mihinana fantsom-panafihana lovia avo lenta avoakan'ny kapila vita amin'ny trakitra. Natao tany Hebei, Sina, OEM, 100% nosedraina alohan'ny fandefasana azy, mihatra amin'ny eoropeanina, japoney, amerikana, kamio sy bus ary kamio hafa
Takelaka fametahana ho an'ny kamio mavesatra, fonosana 7 lohataona, takelaka famolavolana seramika, lozisialy fantsom-bokotra China, Hebei, Sina, antoka ara-kalitao.
Kitapo lozisialy kapila mavesatra be dia be 1878006370 miaraka amin'ny kalitao avo sy ny vidin'ny orinasa
430mm varahina miorina amin'ny takelaka kapila kitapo kitapo japanese
Kapila fametahana hino 430mm Hino, vidiny mety ary vokatra avo lenta. Afaka manome serivisy tsaratsara kokoa izahay, manana ampahany amin'ny clutch azo ampiasaina amin'ny kamio, Bus, Car, Forklift, Tractor
Kalitao Ny kalitao dia azo ampitahaina amin'ny vokatra eo amin'ny tsenan'ny Eoropeana, faritra afovoany atsinanana-atsinanana, aostralia, faritra atsimo atsinanana, sns.
Sombin-tsolika sinoa avo lenta clutch1878063231 takelaka / kapila fametahana amidy
Ny haben'ny takelaka misy ny kamio 31250-5241 dia 350 * 220 * 10, ary avy amin'ny ozin-taratasy any Hebei, Sina izy io, miaraka amina fonosana tsy miandany na fonosana boaty misy loko marika. Nalefaina indrindra tany Eropa sy Etazonia, Azia ary ny afovoany Atsinanana atsinanana, miaraka amina kalitao sy fahombiazana tsara.
T5189-14302 kapila fampirimana traktera ho an'ny Kioti DK65, DK75, DK90
Modely momba ny fambolena miaraka amin'ny takelaka fametahana 325mm takelaka ceram rehetra
Modely 325mm, takelaka kofehy vita amin'ny varahina rehetra, kalitao azo antoka ary takatry, China factory plate plate, serivisy kalitao, manantena ny hiara-miasa aminao